Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ọrụ United States na UNWTO ọhụrụ?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Ọ na-esiri ndị ozi njem nlegharị anya ịga Madrid na njedebe nke ọnwa a iji mee akụkọ maka UNWTO ọhụrụ. O nwekwara ike ịbụ ohere efu maka mba ndị otu UNWTO igosi onye ndu wee bụrụ onye ọsụ ụzọ maka ọdịnihu na UNWTO ọhụrụ, ma ọ bụrụ na ha anọ n'ụlọ ma ọ bụ ziga onye nnọchi anya ka ọ rụọ ọrụ nke onye ozi njem nlegharị anya na UNWTO General Assembly na-abịanụ na Madrid November. 28 - Disemba 3.
United States, Australia, na United Kingdom bụ ndị isi ike na njem nlegharị anya ụwa, mana ọbụghị onye otu World Tourism Organisation (UNWTO).
UNWTO na ndị mmekọ goro ndị nnọchi anya, ndị ndụmọdụ dị oke ọnụ na ndị ọkachamara ndị ọzọ sitere na mba ndị a maka nyocha, nyocha na ọrụ ndị ọzọ, ebe mba ha anaghị akwụ ụgwọ otu.
Usoro ọhụrụ nke UNWTO ọ ga-eweghachi US na ike ụwa ndị ọzọ na njem nlegharị anya n'ụlọ ọrụ UN jikọrọ aka dị ka ndị otu na-akwụ ụgwọ?
US bụ onye guzobere UNWTO. N'ihi na United States ka nwere nnukwu mmetụta na World Tourism Organisation na njem nlegharị anya mba ụwa n'ozuzu, mana akwụghị ụgwọ onye otu emeela ka UNWTO ghara ịdị mkpa, enweghị ego, na-adịkwaghị ka onye ndu a na-akwanyere ùgwù maka ngalaba ọha nke ụwa njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Na World Tourism Day 2016, foOnye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi, kwuru eTurboNews: "N'ụbọchị njem nlegharị anya ụwa na 2016, enwere m afọ ojuju na echiche."
Mzembi chọrọ ka steeti na ókèala US ọ bụla sonyere UNWTO n'onwe ya. N'ịtụle steeti ọ bụla enweelarị onwe ya na njem nlegharị anya ahịa n'ime na n'èzí US, echiche a abụghị ezi uche.
"Ikekwe, nke a bụ ihe ngwọta maka nnukwu ike njem nlegharị anya n'ụwa, United States, isonye na United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Ihe ngwọta nwere ike ịbụ ndị otu ọhụrụ 50 na UNWTO, otu steeti n'otu oge, "Mzembi gwara eTurboNews.
A kparịtara usoro a na-enweghị isi na onye nnọchi anya US Harry K. Thomas, Jr., na Dr. Walter Mzembi, onye nkwuputa okwu maka odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO na 2017 mgbe ọ na-eme mkpọsa megide Secretary General ugbu a Zurab Pololikashvili. .
UNWTO na-aga n'ihu na-ekerịta data, nyocha na okwu ndị ọzọ na US na ọtụtụ mba ndị na-abụghị ndị otu na-enwetaghị ego. Nke a n'ezie adịghị adigide.
Na June 2019, asịrị malitere gbasara United States ịbanye na World Tourism Organisation. Isabell Hill, Director, jụrụ nke a ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ njem na njem nleta nke mba dị na Ngalaba Azụmaahịa US, ma n'azụ ihe nkiri, ihe omume yiri ka ọ na-aga n'ihu na nke a.
Nke a bụ na Ọktoba 2019, ọnwa isii tupu COVID-6 bibie njem nlegharị anya. Nke a bụ njedebe nke ọchịchị Trump na United States.
The Paris Climate Agreement, Iran nuclear deal, Trans-Pacific Partnership, UNESCO - ndị a niile bụ nkwekọrịta mba ụwa ma ọ bụ usoro iwu United States wepụrụ kemgbe President Trump depụtara usoro "America First" na mmalite nke okwu mbụ ya.
Na 2019, onye enyemaka odeakwụkwọ nke steeti Kevin E. Moley nwere nzukọ na ndị isi UNWTO na Madrid ka ha gaa n'ihu mkparịta ụka banyere ịbanye US.
Na June 2019, a Ndị nnọchi anya White House gara nzukọ Executive Council nzukọ na Baku, Azerbaijan. N'otu oge ahụ, a mara ọkwa ebumnobi US ịmegharịgharị otu. “America First apụtaghị America naanị,” ka onye isi osote onye isi ndị ọrụ White House kwuru na-ekwu.
Na June 2019, mgbe atụmanya nke ịbanye na "okwu ndị bara uru na United States" bụ nke mbụ kwupụtara, Ngalaba Ọchịchị US wepụtara nkwupụta na-ekwu na "Nchịkọta ahụ kwenyere na UNWTO na-enye ikike dị ukwuu iji mee ka uto na mpaghara ahụ pụta, mepụta. ọrụ ọhụrụ maka ndị America, ma gosipụta oke na ịdịmma nke ebe ndị njem nlegharị anya US.
UN n'oge ahụ nwere mmasị na atụmanya nke ịbanye US. Na nkwupụta ewepụtara na 2019, odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili kwuru, "Ọ bụ ihe na-agba ume nke ukwuu na United States gosipụtara n'ụzọ doro anya ebumnuche ya ịbanye na UNWTO na ịkwado njem nlegharị anya dị ka isi ihe na-akpata ọrụ, itinye ego na ịzụ ahịa, na ichebe eke. na ihe nketa ọdịbendị n'ụwa niile. "
Ụlọ ikike njem ndị ọzọ na-abụghị ndị òtù UNWTO gụnyere UK, Canada na Australia. Ọ bụ ezie na mba ndị ahụ hapụrụ n'ihi ihe dị iche iche, enweghị nlekọta na ikike ikike mmadụ nke ndị na-anọdụ na kansụl ndụmọdụ ya abụwo nkatọ a na-akatọkarị nzukọ a.
The World Tourism Organisation chọrọ ikike ndị a bụ isi njem ka ọ bụrụ ndị otu. Nke a abụghị naanị maka ego ndị otu chọrọ ngwa ngwa, kamakwa iji nọgide na-enwe ọnọdụ ọ bụla dịka òtù zuru ụwa ọnụ maka ngalaba ọha na-ahụ maka njem nlegharị anya ụwa.
Site na ọtụtụ mmebi iwu n'ime ndị isi ugbu a na UNWTO, yana COVID-19 na-akwalite njem nlegharị anya n'ime nnukwu ihe ịma aka ya mgbe ọ bụla, atụmanya nke ịbanye na United States ga-adịpụrụ adịpụ - ka ọ bụ na ọ bụghị?
Isabel Hills, onye abụghị naanị onye isi oche nke National Travel and Tourism Office, Ngalaba Azụmahịa, United States, kamakwa Onye isi oche Òtù Na-ahụ Maka Njikọ Akụ na ụba na mmepe (OECD) Kọmitii njem nleta, nwere ohere zuru oke na akwụkwọ UNWTO niile na nyocha, n'agbanyeghị na United States dị ka onye na-abụghị onye otu, anaghị akwụ ụgwọ ndị otu UNWTO chọrọ ngwa ngwa maka afọ 10 gara aga.
OECD bụ ọgbakọ nke gọọmentị na-atụnyere ma na-agbanwe ahụmịhe amụma, na-achọpụta omume ọma n'ihi ihe ịma aka ndị na-apụta, ma kwalite mkpebi na ndụmọdụ iji wepụta amụma ka mma maka ndụ ka mma.
Ebumnuche OECD bụ ịkwalite atumatu na-eme ka ọdịmma akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwuo mma.
Site na njem nlegharị anya na-amụta ka esi arụ ọrụ na COVID, Saudi Arabia na Spain malitere mmegharị ọhụrụ wee webata US na ngwakọta a. N'okpuru nduzi Saudi, e hiwere otu mba mbụ na njem njem nlegharị anya na COP26 na Glasgow na mbido ọnwa a.
Ikekwe enwere ohere maka atụmatụ ọhụrụ a itinye n'ime UNWTO ọhụrụ? Ọ bụrụ na a ga-etinye atụmatụ a n'ime UNWTO ọhụrụ n'okpuru ọchịchị ọhụrụ, enwere ohere dị adị maka ndị niile na-ahụ maka njem nlegharị anya n'ụwa ịbanye na nzukọ njem nlegharị anya ọzọ.
Ngosipụta dị otú ahụ nke nsonye bụ nke mba ndị tọrọ ntọala mere atụmatụ ọhụrụ a ugbua na ugboro ugboro.
Ihe ọhụrụ a na-emepe ọzọ na-akwado mkpa ọ dị na UNWTO General Assembly na-abịa iji tọọ nzukọ ahụ n'ụzọ ọhụrụ.
A na-eme ka ohere nke ndị ozi njem nlegharị anya nke mba ndị otu UNWTO gaa Madrid na njedebe nke ọnwa a wee sonye na Mgbakọ General na-eme ka ọ sie ike karị kwa ụbọchị.
Nzukọ Ezumezu nwere ike bụrụ nzukọ nke ndị nnọchi anya Madrid maka abamuru nke mba ole na ole so na ya. Nke a nwere ike ọ gaghị eweta ọnụọgụ vootu dị mkpa ma nwee ike ịmanye nnọkọ ọzọ n'oge ọzọ.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka mba ndị otu UNWTO na ndị ozi ha ghọta mkpa mmemme ahụ.
Onye isi oche ATB Cuthbert Ncube & Hon. Onye ode akwụkwọ njem nlegharị anya Kenya Najib Balala
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, gwara eTurboNews taa site na nleta ọrụ na Senegal, "Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-atụ aro ka Africa dịrị n'otu ma gbakọta na Madrid maka Mgbakọ UNWTO."
Nke a bụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ekwenyeghị onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a na Mgbakọ Mgbakọ UNWTO na-abịa na Madrid na Disemba 3, 2021:
Nzukọ izugbe agaghị anabata ntụnye nke Council Executive nyere maka ọkwa nke odeakwụkwọ ukwu nke nzukọ a.
Ọ ga-agwa ndị isi oche na nnọkọ 115th nke a ga-eme na Madrid, Spain, Disemba 3, 2021, imepe usoro ọhụrụ maka nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu nke nzukọ ahụ.
Ọ ga-agwa ndị Council Council na usoro ntuli aka dị otú ahụ nwere usoro nhazi oge kacha nta nke ọnwa 3 yana karịa ọnwa 6, malite na ụbọchị mmeghe nke usoro ntuli aka.
Ọ ga-agwa Onye isi oche nke Council Executive na Secretary General nke nzukọ ahụ ka ọ kpọkọta ndị otu Executive Council 116 na ọgbakọ ọgbakọ pụrụiche na Mee 2022 n'ebe na ụbọchị a ga-akọwapụta ya.
Ọ bụrụ na onye odeakwụkwọ ukwu nke ugbu a agaghị ekwenye ọzọ na Nzukọ Ọchịchị na-abịanụ, ọ nwere ike ịnwe ohere ọzọ ịbanye n'asọmpi ngosi ọhụrụ maka ọkwa a.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ntuli aka ọhụrụ na nke ziri ezi ga-abịa ebe a ga-ahapụ ndị ọhụụ ọhụrụ ịsọ mpi na mkpọsa maka ọkwa ahụ.
Ọtụtụ ndị na-ekwu, nke a abụghị ikpe na Jenụwarị 2021, mgbe Council Executive họpụtara Zurab Pololikashvili ọzọ.
Ọtụtụ ndị kwenyere na nke a nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma maka ọdịnihu nke UNWTO na njem nlegharị anya ụwa. Ọ bụkwa ụzọ kacha mma maka ndị otu ọhụrụ nwere ike, dị ka United States na mba 10 ndị sonyere na atụmatụ zuru ụwa ọnụ nke Saudi Arabia na Spen na-ebute ụzọ ka ha bụrụ ndị na-ebu ibu maka echi ọhụrụ na mma maka World Tourism Organisation.
O nwedịrị ike ịtọ ntọala dị mma maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO ugbu a.
Ndị Minista UNWTO (Ndị nnọchiteanya) na-eme atụmatụ ịga Mgbakọ General na Madrid November 28 - December 3 nwere ike ime akụkọ ihe mere eme maka njem nlegharị anya ụwa.
Ịgaghị Nzukọ Ezumezu nwere ike ịpụta ohere efu maka mba dị otú ahụ na-efunahụ ihe omume a dị mkpa.
Ndị ga-efu na General Assembly bụ eTurboNews ndị nta akụkọ. N'ọnwa Febụwarị 2018, eTurboNews ji nganga kwupụta ọkwa nke Marcelo Risi dị ka Senior Media Officer nke UNWTO.
Marcelo kwuru eTurboNews na February 2018 mgbe a jụrụ ya ihe kpatara nzaghachi sitere n'aka UNWTO anaghịzi adị na-eme ihe siri ike, azịza ya bụ: "Enwere usoro na nkwado ọhụrụ."
Ugbu a, otu Marcelo Risi ka e nyere iwu ka ọ bụrụ aha ojii eTurboNews site na UNWTO dị ugbu a, na-amanye eTurboNews ime ndokwa ọzọ iji rụzuo Nzukọ Izugbe a dị mkpa nke ọma.